Munyu Chlorinator MaSystem, Swimming Pool Zvishandiso - Blueworks
Nyowani Mvura Sisitimu
Nyowani nyowani uye akakwana anotevera chizvarwa sanitizer yedziva, hapana chakasiyana pane izvo zvinobuda mumba mako pombi. Nyanzvi uye vane ruzivo pane yakachena mvura sisitimu.
Haisisina kusanganiswa nemvura kana piritsi chlorine gasi, kuyerwa kana kukanganisa. Zvino, blueworks inokupa disinfection mhinduro, iwe unogona otomatiki kuwana yakachena, yakapfava uye yakachengeteka mvura. Isu tine munyu chlorinator system uye ionizer uye mune ramangwana ozone yekupa iyo yekupedzisira muhunhu hwemvura.
Mainjiniya muUS, anotenderwa ne Energy Star, nyanzvi mukugadzira iyo pombi mota uye madhiraivha, Blueworks iri pano kuti ipe zvaunoda pamapombi ako.
Kuti utsigire yako chlorinator system inoshanda zvakasununguka kuve nehutsanana, yakachena mhando yemvura, Blueworks ine akasiyana maseru ekutsiva. Ivo akavimbika uye anogara kwenguva refu sezvatinogadzira anopfuura makore gumi nematanhatu.
Blueworks ine dzakasiyana siyana dzekumhanyisa mapombi neCalifornia Energy Star Kubvumidzwa uye ETL, Canda CSA Kubvumidzwa uchivimbisa iwe uchave nepombi yakanaka yedziva rako. VSP pombi pombi ichave yakakosha mumusika weUS sezvo iri yepamusoro inoshanda kuchengetedza simba.
Kushambira Pool Mvura Yemunyu Sisitimu BLSC
Munyu Chlorinator BLPT
Blueworks IGP2115VS Inosiyana Yekumhanyisa Pump
Blueworks AGP1515VS Inosiyana Yekumhanya Pump
Blueworks Vsm Premium Kubudirira Kunosiyana Speed ​​...
BLUEWORKS CORPORATION iri nyanzvi mukugadzira nekugadzira huwandu hwakazara wemidziyo yekushambira. Semunhu anotungamira kugadzira, takaisa bazi muNC, USA mushure mekutengesa sevhisi. Mushure memakore gumi ekuwedzera, isu takura kuva imwe yezvakakosha dzimba dzekushambira accessories muUSA.
Zvigadzirwa zvinosanganisira, Munyu Chlorinator, Munyu Chlorinator Cell Kutsiva, Saltwater System Zvikamu, Pool Mwenje, Pool Alarm, Pool Timer, Pool Pump nezvimwewo.